पशुपतिमा यस्तो देखियो साधुहरुको चहलपहल (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पशुपतिमा यस्तो देखियो साधुहरुको चहलपहल (भिडियो)
काठमाडौँ। भोलि महाशिवरात्री । पशुपत क्षेत्रमा पछिल्ला दिन निकै भिडभाड बढेको छ । मंगलबार शिवरात्री मेलाको भव्य शुभारम्भ भएको छ । विहानैदेखि पशुपत क्षेत्रमा भिड बढेको छ ।
आइतबारको तुलनामा सोमबार पाशुपत क्षेत्र साधुसन्त र जोगीले भरिभराउ देखिन्थे । सोमबार साँझसम्म उनीहरु आउने क्रम जारी नै थियो । सोमबार आएका साधुसन्त तथा जोगीहरु आफ्ना लागि स्थान खोज्दै थिए भने कोही आगो ताप्दै गाँजाको धुँवामा मस्त थिए ।
यसपटक पशुपति मन्दिरको दर्शन गर्न करिब १२ लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान गरिएको छ । यसैक्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले शिवरात्रि पर्वलाई लक्षित गरेर सवारी व्यवस्थापन योजना निर्माण गरेको छ । महाशाखाले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने भक्तजनलाई सहज रुपमा दर्शन गरी फर्कने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष वरपरका क्षेत्रमा सवारी प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।
पशुपतिमा साधुसन्तको चहलपहल दर्शाउने भिडियोः